‘Women Make the News’: Lahatahiry An-Tserasera Mampifandray ny Mpanao Gazety Amin’Ireo Vehivavy Thailandey Manampahaizana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2018 10:58 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Português, Ελληνικά, Español, Français, English
Taitra sy feno ahiahy amin'ny fahavitsian'ny vehivavy manampahaizana anaovan'ny fampitam-baovao be mpanaraka antsafa, Namoaka tranonkala iray ny UNESCO ao Bangkok hampifandray ny mpanao gazety sy mpikaroka Thailandey amin'ireo vehivavy mpampianatra ambony, na manampahefana ambony, mpikambana amin'ny governemanta, mpitarika orinasa na vondron'orinasa ary mpikatroky ny FTMF (ONG).
Navoaka tamin'ny taona 2017 ny fitoeran-dahatahirin'ny “Women Make the News” [Vehivavy Manao Vaovao – Vehivavy Hita amin'ny Vaovao] hampandrosoana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fampitam-baovao sy ny fiarahamonina. Atolony ao ny lisitry ny laharana sy ny adiresin'ny vehivavy manampahaizana manokana amin'ny taranja iray na maromaro mba hanasongadinana feom-behivavy betsaka kokoa rehefa misy ny fanaovana tati-baovao.
Notononin'ny UNESCO Bangkok ny fanadihadiana iray nataon'ny Thai Public Broadcasting Service [Tolo-Panjakana Fampielezam-Peo sy Sary Thailandey] tamin'ny taona 2014 izay nahita fa iray amin'ny manampahaizana anaovan'ny vaovaon'ny Fahitalavitra thailandey miisa efatra ihany ao anatin'ny iray volana no vehivavy.
Raha nitady manampahaizana manokana ao amin'ny “internet” ao Bangkok ny mpanoratra, nalahatry ny fitoeran-dahatahiry ireo manampahaizana maro izay ao anatin'ny sekoly tsy miankina toy ny Oniversite Thammasat sy ny Oniversite Chulalongkorn, ary toy izany ihany koa ny minisitra lefitra misahana ny fanabeazana.
Fantaro bebe kokoa ny fomba fampiasana ny fitoeran-dahatahiry ao Thailandy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fijerena ity lahatsary fohy ity: